Falal dambiyeedyadii ka dhacay gobollada Somaliland sannadka Sannadkii u Dambeeyay Ka Khacay Somaliland. – Radio Daljir
Falal dambiyeedyadii ka dhacay gobollada Somaliland sannadka Sannadkii u Dambeeyay Ka Khacay Somaliland.
Nofeembar 5, 2010 12:00 b 0
Hargeysa, Nov 05 – Ciidanka Booliska Somaliland ayaa soo bandhigay falal dambiyeedyo tiro badan oo sannadkii u dambeeyay ka dhacay guud ahaan dalka.
Hoggaanka hawgelinta Booliska Md. Cabdulaahi Fadal Iimaan oo hadal ka jeediyay munaasibad shalay loo sameeyay sannad-guurada 17aad ee asaaska ciidanka oo Madaxweynuhu ka qaybgalay, waxa uu soo bandhigay dhacdooyinkii saddexdii bilood ee Xukuumadda cusubi xilka haysay ka dhacay dalka iyo fal-dambiyeedyada dhacay intii u dhexaysay November 2009 ilaa November 2010.
?Waxqabadkii ciidanka Booliska ee 100-kii maalmood e ugu dambeeyay muddadaa saddexda bilood ah, waxa ka dhacay dalka 26 dil, waxa ku dhintay 26 qof, waxa la qabtay 21 gacan-ku-dhiigle, waxaana baxsaday shan qof oo ciidanka Boolisku daba joogo. Waxa dalka ka dhacay 15 Kufsi, waxa galay 48 eedaysane, waxa la qabtay 40, waxaana baxsaday 8 kale.
Shilalka gaadiidka ee dalka ka dhacay saddexdaa bilood ee u dambeeyey waa 387 shil. Waxa ku dhintay 48, waxa ku dhaawacmay 298, khasaaraha gaadiidkuna waa 221.
Khasaaraha xoolaha 188. Khasaaraha dhismaha 48,? ayuu yidhi Mr. Fadal oo ka hadlayay fal-dambiyeedyada boqolkii maalmood ee u dambeeyay iyo dhacdooyinkii dalka ka ka dhacay.
Hoggaanka hawlgelinta Boolisku waxa uu sidoo kale soo bandhigay dhacdooyinkii sannadkii u dambeeyay ka dhacay Somaliland ee ay ciidan ahaan diiwaangeliyeen. ?Sanadkii u dambeeyey ee 2009 November ilaa 2010 November, waxa dalka ka dhacay guud ahaan 18,343 kiis. Waxa maxkamad la horgeeyay 5015 kiis, waxa la xukumay 1788 kiis, waxa si gaaban lagu dhameeyey 8584 kiis, waxa beenawday ama caddaan waayay 3511 kiis, waxaana baadhis ku jira 1223.
Dilalka dalka ka dhacay November 2009 ilaa Novbember 2010 waa 81 dil, waa ku dhintay 81, qof waxa la qabtay 64 gacan-ku-dhiigle, waxa baxsaday 17 gacan-ku-dhiigle.
Tirada shilalka baabuurta ee sanadkani waxay ahaayeen 1496 shil, waxa ku dhintay 148 qof, waxaana ku dhaawacmay 1279 qof, khasaaraha gaadiidkuna 410 gaadhi, khasaaraha xooluhuna 182 neef, halka khasaaraha dhismayaashu ahaayeen 1496.
Guud ahaan kufsiyada sanadkan dalka ka dhacay waa 186 kufsi, waxa galay 206 eedaysane, waxa la qabtay 162 eedaysane, waxaana baxsaday 144 eedaysane,? ayuu raaciyay.
Cabdilaahi Fadal Iimaan, waxa uu sheegay in dhacdooyinka sannadkii tegay dalka ka dhacay ay ku jiraan fal-dambiyeedyo la xidhiidha carruur la tuuray iyo dad naftooda deldelay.
?Tirada carruurta la tuuray waa 8 carruur ah, 2 way dhintay, 6-na nolol ayuu ciidanku ku qabtay.
Tirada dadka isdeldelay waa 6 qof, inta dhimatay 6 waa qof. Tirada mukhaadaraadka la qabtay waa 2221 litir oo Khamri, waxaana lagu qabtay 21 eedaysane, kuwaasoo dhamaantood la horgeeyay maxkamadaha kala duwan,? ayuu yidhi.
Weriye C/fitaax J. Mire oo xabsiga laga sii daayey, kana hadlay la-kulamadii mudadii uu xirnaa.
Madaxtooyada Bossaso oo lagu soo bandhigay hub, saanad, gawaari dagaalka & walxaha qarxa.